UTom Hanks 'iGreyhound iphakama njengeyona Apple TV + yeNkulumbuso | IPhone iindaba
Alithandabuzeki elokuba umboniso bhanya bhanya okhutshwe kwi-Apple TV + kunye no-Tom Hanks, kuye kwafuneka ukuba abe yimpumelelo kwinkonzo yevidiyo esasazwayo yamakhwenkwe e-Cupertino kwaye kubonakala ngathi iGreyhound iya kudlula kulo lonke uthotho lweefilimu abanazo Ikhathalogu. Inkulumbuso yale filimu yenzeke kwinkonzo ye-Apple emva kokubheja ngokuqinileyo kuyo kwaye namhlanje ngokwendlela yokugqibela, oku kuye kwaba yeyona projekthi iphambili kwinkonzo kwimbali yayo yonke.
Kwaye ayikuko ukuba iApple TV + ayinazo uthotho olulungileyo kunye neemovie ezinje nge "The Banker" esandula ukukhutshwa eneenkwenkwezi u-Anthony Mackie kunye noSamuel L. Jackson, kubonakala ngathi Umphumo kaTom Hanks wenza i-dent kuzo zonke iimuvi kunye nothotho kwaye kunokwenzeka phezulu eqongeni kwiApple TV +. Iintsuku ezintlanu ukusukela okokuqala kwaye akukho datha isemthethweni malunga nokuveliswa kwakhona kwale filimu, kodwa kuyabonakala ukuba abagxeki kunye nabasebenzisi esele beyibonile bonelisekile licebo, iskripthi kunye nemiboniso ebonakalayo yiyo. Ngokusengqiqweni sithetha nge-blockbuster yakwaSony ethengwe yiApple, ke sicebisa ukuba uyibone ukuba unako.
Ngokwale akhawunti yeendaba, i-30% yabo babone ifilimu ngoJulayi 10 babengabasebenzisi abatsha kwaye oku luphawu olucacileyo lokuba iphambili yefilimu inyuse umdla kwinkonzo. Ngoku kuyakufuneka ubone ukuba bangaphi abaseleyo kwinkonzo kwaye ngaphezulu kwayo yonke into i-Apple ekwaziyo ukuyinikela kwakhona kubasebenzisi be-hook. Okwangoku ngale premiere Ngokuqinisekileyo ufumene amawaka aliqela ababhalisile kwinkonzo enokuthi "ibonise" ngoJulayi 30 kwiziphumo zezemali, enye into kukuba zigcinwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » IGreyhound kaTom Hanks ibekwa njengeyona iphambili ye-Apple TV +
Iikhamera ze-Eufy zangaphakathi zeKhamera zihlaziywa ukuze zihambelane neKhayaKit